Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah Euro Dollar: Sida Loogu Ganacsado Faaiido | vfxAlert official blog
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah euro dollar (EUR / USD): ganacsi faaiido leh oo taxaddar leh
Doorashada hanti ganacsi oo ah kan ugu dhaw kulan xaaladda suuqa ee hadda ma fududa, waayo, xirfadlayaasha, ha bilowga ah oo keliya. Waad furi kartaa heshiisyo isku mar ah qalab kala duwan oo isku dayaya inaad yareyso halista guud, ama aad doorato mid, adoo xoogga saaraya dhammaan dareenkaaga iyo khibradaada. Kuwani waxay noqon karaan calaamadaha binary ee labada euro / dollar.
Euro waa tartan ugu weyn ee dollar Maraykanka ee dhaqaalaha caalamiga ah, in kasta oo ay 2-3 sano ee ugu danbeysay ee ay booska ayaa xoogaa wiiqay loogana hortegi ee Chinese ah Yuan xoojiyo. Iyada oo ay taasi jirto, labada lamaane ayaa ah kuwa ugu weyn suuqa Forex (23-25% ee wareegga intraday), oo lagu daray ganacsi firfircoon oo ka soo jeeda: mustaqbalka lacagta, CFDs iyo xulashooyinka saamiyada
Labada nin ayaa sidoo kale laftiisa yaridda in nooc kasta oo falanqayn ay sabab u badan lacagta, news, tirakoobka iyo calaamadaha ganacsiga doorasho binary. Falcelin xoog leh oo ku timaadda wixii isbeddello taban ama togan ah ee dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee EU iyo USA. Sababtoo ah xisaabtanka ugu sarreeya, waxay leedahay faafitaano hoose iyo guddiyada dilaaliinta, iyo boqolkiiba sare ee faa'iidada xulashooyinka.
Fadhiga • Forex Yurub (07.00-16.30 UTC). Muddada ugu weyn ee xisaabta ku leh mugga weyn ee macaamil ganacsi. Ilaa 10: 00UTC, dhaqdhaqaaqu wuxuu ku tiirsan yahay ficilada ganacsatada Aasiya ee hagaajiya macaashka / khasaaraha dhammaadka kalfadhigooda. Kahor furitaanka Mareykanka, waxaa jira hoos u dhac muddo-gaaban ah oo ku yimid xigashada.
• Europe-America. (13.30-16.30UTC) . Faa'iido-qaadashada iyo ficilada gardarada ah ee ganacsatada Mareykanka (60-70% wadarta mugga). Muddadan, inta badan dhacdooyinka aasaasiga ah ee muhiimka ah ee Mareykanka waa la siidaayay, kuwaas oo labadaba xoojin kara isla markaana beddeli kara isbedelka weyn. Laguma talin ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah!
• America (13.30-20.00 UTC). Doolarka waxaa lagu xoojiyay dhaq dhaqaaqa raasamaalka laga bilaabo Euro ilaa lacagta dollarka iyo macaamilka saamiyada. Amarada joojinta Yurub ayaa si firfircoon loo tuujiyay, taas oo loo arki karo jaantuska sida soo noqnoqoshada fiiqan oo soo noqnoqda. Dooro dhicitaan ugu yaraan 3-4 saacadood calaamadaha ikhtiyaarrada oo kaliya haddii ay jirto isbeddel cad!
• Asia (20.00-07.00UTC). Wareejinta EUR waxay hoos ugu dhacdaa ugu yaraan; waxaan joognaa banaanka suuqa waxaanan sugeynaa furitaanka Yurub
Iyada oo wax istaraatijiyad iyo habka suuqa ee hadda la falanqeeyo, waa in aan xisaabta ku tilmaamayaasha soo socda:
•	Istaatistikada iyo qiimeynta khabiirka ee xaalada aduunka ee Eurozone iyo USA;
•	Warbixinnada nidaamiyeyaasha maaliyadeed, khudbadaha madaxdooda iyo wakiillada rasmiga ah;
•	Saadaalinta siyaasadda lacagta ee ECB iyo FRS;
•	Dhaqdhaqaaqa tusmooyinka waaweyn ee Yurub (DAX, CAC 40, FTSE100)
•	Qiimaha ilaha tamarta, mustaqbalka badeecadaha, indices dareenka macaamiisha.
Waxaa jira dood dheer-taagan sida in labo ka mid ah la siiyaa iska leh "asaasiga ah" ama "farsamo". Maaddaama ay tahay hoggaamiyaha Forex marka la eego isbeddelka iyo saameynta dhaqaalaha adduunka, arrimaha aasaasiga ah ayaa dhab ahaantii saameyn weyn ku leh isbeddelkeeda waxayna xitaa u horseedi karaan dib-u-celin buuxda ee isbeddelka.
Laakiin waqti isku mid ah, labada nin waa mid aad u "farsamo" oo inta badan maalintii ganacsiga (gaar ahaan casharka Yurub iyo xirmi ee Europe / America) tilmaamayaasha, farsamo iyo nidaamyada laambaddii waxaa shaqeeyay baxay "classic", taas oo waxa ay taasi suurtogal u tahay in loo furo heshiisyo bilowga iyadoo la ilaalinayo maareynta lacagta adag. Aan ku aragno tusaale IQ Option Option software:
On bidix, reaction in wararka ku saabsan NonFarm Payrolls (tirada dadka ka shaqeeya noo qaybaha non-beeraha): hoos u deg deg ah oo ku saabsan xogta xun, raaceen by kabashada ah uptrend ah. Haddii dillaalku kuu oggolaado inaad furto ikhtiyaarka tuubbada ilbidhiqsiyaadka ugu horreeya ka dib daabacaadda, waxaad heli kartaa faa'iido dhakhso leh oo xitaa u furfuran dhinaca ka soo horjeedka bilowga hore ee dib u noqoshada.
On xaq, ganacsiga on isbeddel la isticmaalayo Tilmaame taxadirayo - saddex celceliska dhaqaaqin (guurista Celceliska) mowjadda eego midba midka kale. Istaraatiijiyaddu waxay u shaqeysaa sida biilka Williams loogu talo galay: waxaan fureynaa ganacsi markii seddexda sadarba ay soo jeestaan ama hoos udhacaan, isdhaxgalka macnahoodu waa dhamaadka isbeddelka iyo bilowga dhaqdhaqaaq dhinac ah (fidsan).
Haddii Degenaansho ee labo ka mid ah oo ku saabsan guri gaaro 30-50 dhibcood, waxaana ay tani marar badan dhacdo, waxa aad furan kartaa fursadaha binary on rebounds ka xuduudaha kala duwan. Isla mar ahaantaana, waxaan eegeynaa oscillators-ka xad-dhaafka / iibka badan, oo ah inay ka baxsan yihiin aagaggooda aadka u daran .
Qaybtani waxay waxaa badanaa laga sameeyaa in aad u sheegto sida wanaagsan wax walba oo ay tahay iyo waxa laga qaban karo xataa si fiican. Waxaan mari doonnaa waddo kale oo aan fiirineyno EUR / USD:
Bilowga • Wax ha la leh su'aal fudud "Maxaad Ganacsi EUR / Labada nin USD?" Marka laga tago qodobka waqtiga, marka ganacsade ku sugan yahay gobolka Yurub - kalfadhiyada Aasiya iyo Ameerika waxay dhacayaan galabtii iyo habeenkii, qaab nololeedkan kuma haboona qof walba. Jawaabtu waxay u egtahay inay tahay "maxaa yeelay qof walba wuu sameeyaa." Waxaadna noqon doontaa gabi ahaanba mid sax ah: waxkastoo barto ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, istiraatiijiyado, lataliyeyaal, degello internet, joornaallo iyo kanaallo YouTube ah ayaa si isdaba joog ah ugu celceliya qoraalka ku saabsan "faa'iidada EUR / USD waxaadna u baahan tahay inaad ku bilowdo" Malaha 99% ganacsatada ayaa heshiiskoodii ugu horreeyay halkan ku yeeshay.
Xitaa ka dib markii deposit ugu horeysay waxaa laga badiyay, qaar badan oo sii wadaan in ay isku dayaan in ay ku garaacday suuqa loo eegin hanti kale. Noqo qof dabacsan, hareeraha fiiri oo fur fursadaha halka ay runti faa'iidada u leedahay .
• hafray soo socda: «Labada ciyaaryahan ayaa Tilmaamo gaar ah u gaar ah, nidaamyada iyo xidhiidhada tilmaamayaasha ay. Waa hogaamiyaha wareejinta Forex, sidaas darteed waa faa'iido badan oo ammaan ah in laga ganacsado dulsaar ». Haddii aad si dhab ah u maleyneyso sidaas, waxay ka dhigan tahay inaad tahay qof bilow ah oo aad u baahan tahay inaad ka takhalusto dhalanteedka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka hor inta deebaajiga uusan dhammaan. Aan ku aragno tusaale IQ Option Option software:
Waxaan ku aragnaa dhaqdhaqaaqa Euro iyo doolarka Australiya isla waqtiga iyo kala-goynta maalinta ganacsiga. Australiyaanku si aad ah ayey uga liitaan xagga soo-wareejinta guud ahaanna waa tan ugu kacsan kal-fadhiga Aasiya, marka Euro-du “hurdo galo”. Hagaag, meeye astaamihi shaqsiyadeed? Waxaa jira isbeddello, dib u noqosho, safaf dhinac ah, hooska shumaca waaweyn, iyo mala awaal cad oo ku saabsan dhacdooyinka aasaasiga ah. Ku dar labo kale oo kale, xaaladdu waa isku mid.
Fariin kasta oo in istaraatijiyad ama lataliyaha ku jirto liiska lammaane lacagta waa in la gartay oo kaliya sidii talo iyo wax kale. Calaamadaha ikhtiyaarrada ayaa siinaya kaliya suuqa iyo jaantuska!
• Guurida on inay quraafaad saddexaad: "Labada nin waa maximally dareere ah, taas oo macnaheedu yahay in saadaasha ay noqon doontaa ilaa xad lagu kalsoonaan karo". Haa way tahay. Waxaa jira xisaabin ku filan; khidmadaha laga helo dilaaliinta binary sidoo kale waa kuwo aad u weyn, oo u dhexeeya 85-90%. Laakiin waxa ku saabsan saadaalinta? Aynu si macquul ah uga fikirno: haddii ay jiraan lacagta ugu badan, markaa dhammaan kuwa sameeya suuqyada waaweyn iyaguna halkaas ayey joogaan. Maxay tani ku buuxsan tahay istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waxaan u akhrinaynaa sadarka soo socda ee kaqeybgalayaasha suuqyada Forex iyo kuwa dhexdhexaadka ah
• Tan iyo dhamaan ciyaartoyda waaweyn ee ku jira EUR / USD, waxaa loola jeedaa in saameyn ay ku quote labada ciyaaryahan ee noqon doonaan xooga badan ee gaarka loo leeyahay. Tan waxaa lagu arki karaa iyadoo la fiirinayo himilooyinka fiiqan ee inta badan jihooyinka badan leh marka la sii daayo wararka muhiimka ah iyo tirakoobka Midowga Yurub iyo xitaa Ameerika. Sidoo kale, ganacsatada qibrada leh, layaab ma noqon doonto in la arko "baaldiyo" waaweyn oo shumacyo ku jira xitaa iyadoo jidh weyn leh - kuwa suuqa wax ka sameeya ayaa go'aansaday inay xoogaa mug ah ku tuuraan oo ay si kooban ugu wareejiyaan qiimaha jihada ay u baahan yihiin, iyagoo tuuraya joogsiga suuqa.
Tani macnaheedu ma aha at dhan in aad u baahan tahay in la siiyo ilaa ay lacagaha ugu weyn iyo raaxeysan wax qalaad sida peso Mexico iyo qoondayn Hindiya. Xaaladda halkaas ka jirtaa iskuma dhiibayso falanqayn kasta, oo ficil ahaan midkoodna dilaaliintu ma siinayo xulashooyin iyaga.
Ka hor inta aadan la furo xulashada dollar Euro ah, in loo diyaar garoobo isbedelka af xaaladda oo qarka u dhacayo oo ah ugu yaraan 5-7 ulo gudban ka sameeyey waqtiga shaqada. Marka waxaad si badbaado leh u sugi kartaa fikradaha gaagaaban oo aad ku noqon kartaa faa'iido ka dib markii isbeddelku dib u bilowdo .
Let`s koob. Iyadoo ay taasi jirto oo dhan, calaamadaha binary ee EUR / USD waa inay ku jiraan xirmooyinka ganacsiga ee dhammaan ganacsatada. Xitaa haddii aadan ka ganacsan hantidan, waxaad u baahan tahay inaad fahamto dhammaan waxyaabaha ka dambeeya. Labada lamaane ayaa ahaa oo sii wadi doona inay noqdaan kuwa ugu qaalisan uguna dareeraha badan, taas oo macnaheedu yahay inay saameyn ku yeelan doonto suuqa Forex oo dhan waxayna sameyn doontaa isbeddello isdaba joog ah iyo isbeddellada dhexdhexaadka ah iyo muddada-dheer.